ब्रस गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु के-के हुन्? :: डा सुदिन शाक्य :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
ब्रस गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु के-के हुन्?
डा सुदिन शाक्य बुधबार, चैत २, २०७८, ०७:०२:००
ब्रस गर्ने तरिकाहरु छन्। ब्रस गर्दा सिधा गर्नु हुँदैन। गिजाबाट दाँत तर्फ बिस्तारै फोहोर निकाल्ने बाटोमा गर्नुपर्छ। ब्रस गर्दा विशेष गरि फ्लोराइड भएको मञ्जनहरु प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ।
ब्रस एकदमै कडा हुनुहँुदैन। सकेसम्म नरम किसिमको ब्रस प्रयोग गर्नुपर्छ। विशेष गरि एंगल भएको ब्रस प्रयोग गरेमा पछाडि सम्मको फोहोर निकाल्न सकिन्छ। बुरुषलाई करिब ४५ डिग्रीको एङ्गलमा ढल्काई हलुकासँग गोलोगरी ब्रसलाई चलाएर दाँत माझ्नुपर्दछ। व्यवस्थित तरिकाले ब्रस गर्न नसकेमा पूर्ण रुपमा दाँत सफा नहुन सक्छ। पहिला दाँतका बाहिरी सतह र विस्तारै चपाउने भाग तर्फ माझ्दै जानुपर्छ।
दाँत भनेको खाना चपाउनको लागि चाहिने हो। दाँत स्वस्थ भएन भने हामीहरुले खाएको खाना राम्रोसँग चपाउन सक्दैनौं। यदि खाएको खाना राम्रोसँग चपाउन सकिएन भने आन्द्रा र पेटमा राम्रोसँग पाचन क्रिया हुनसक्दैन। जसको कारण बिस्तारै पेटको समस्या पनि बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसैगरी सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले गर्दा गिजा, मुखमा क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। साउथ एशियामा यसको प्रभाव बढि नै छ।
- डा सुदिन शाक्य